Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Yurub » WHO: Wakhtiga waajibaadka tallaalka Yurub hadda waa hadda
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Education • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • News • Dadka • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Horraantii Noofembar, WHO waxay ka digtay in Yurub ay "xarun u tahay" masiibada COVID-19.
Sida uu sheegay sarkaal sare Ururka Caafimaadka Adduunka (WHO) rasmiga ah, Yurub waa inay si dhab ah uga fiirsato dhaqangelinta tallaalka khasabka ah ee ka dhanka ah coronavirus, iyadoo la eegayo soo kabashada COVID-19 ee ugu dambeysay ee qaaradda.
Agaasimaha fulinta ee WHO ee Yurub, Robb Butler, ayaa sheegay in la joogo “waqtigii wada hadalkaas laga lahaan lahaa qof iyo aragti dadweyne labadaba. Waa dood caafimaad qabta in la qabto.”
Butler ayaa intaa ku daray, si kastaba ha ahaatee, in "waajibaadka noocan oo kale ah ay ku yimaadeen kharashka kalsoonida, ka mid noqoshada bulshada" waagii hore.
Horaantii Nofeembar, ayaa WHO Waxay ka digtay in Yurub ay "ku taal xudunta u ah" masiibada COVID-19, halka horaantii usbuucan, hay'adda caafimaadka adduunka ay sheegtay in qaaraddu ay 60% ka tahay cudurrada COVID-19 ee adduunka iyo dhimashada usbuucii la soo dhaafay. The WHO wuxuu rumeysan yahay in tirada dhimashada masiibada ah ee Yurub ay gaari karto 2 milyan marka la gaaro Maarso 2022, haddii fiditaanka fayrasku sii socdo oo aan la xakameyn.
Si kastaba ha noqotee, agaasimihii hore ee Waaxda Caafimaadka Hooyada, Ilmaha iyo Dhallinta ee WHO, Anthony Costello, wuxuu kula taliyay dowladaha inay si taxaddar leh ugu tuntaan ka dhigista tallaalka qasabka ah cabsida laga qabo "in la iska celiyo dad badan oo aan kalsooni ku qabin dowladda iyo tallaallada." Halkii laga isticmaali lahaa amarrada iyo xaaqidda qufulka, wuxuu u dooday tillaabooyinka sida xirashada maaskaro iyo ka shaqeynta guriga.
Yurub oo dhan, kaliya 57% dadka ayaa si buuxda looga tallaalay COVID-19, marka loo eego tirakoobyada ay bixiso mareegaha xogta ee adduunkeena.
Jimcihii la soo dhaafay, ayaa Hogaamiyaha Austria, Alexander Schellenberg, lagu dhawaaqay in tallaalku uu qasab ku noqon doono dhammaan dadka deegaanka, oo mamnuucaya kuwa u qalma ka-dhaafitaanka caafimaad laga bilaabo Febraayo 1, 2022. Kuwa diida tallaalka waxay filan karaan ganaaxyo culus, sida ay sheegtay warbaahintu. Si kastaba ha ahaatee, weli ma jiro go'aan ku saabsan da'da saxda ah ee Australiyaanka looga baahan doono in la tallaalo. Austria waa waddankii ugu horreeyay ee Yurub ah ee soo roga amarro fara badan, iyadoo inta badan waddammada kale ee qaaradda ilaa hadda ay tallaalka ka dhigayaan mid waajib ku ah shaqaalaha qaarkood oo keliya, iyadoo daryeelka caafimaadka iyo shaqaalaha dawladdu ay yihiin kuwa ugu horreeya.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira tiro yar oo waddamo ah oo adduunka ah kuwaas oo sidoo kale amray in la tallaalo COVID-19 dhammaan muwaadiniintooda. Indonesia ayaa tillaabada qaaday bishii Febraayo, Micronesia iyo Turkmenistan ayaana ku dayday xagaagii.
26 Noofambar 2021 – Vaksinefacismen iyo Bill Gates – Profetiske Artikler wuxuu leeyahay,
Nofeembar 26, 2021 at 17: 50
"Waxaan rabaa inaan ka mid noqdo madaxda sare ee Verdens helseorganisasjon (WHO) ee Europe seriøst vurdere å vedta obligatorisk vaksinasjon mot koronavirus, i lys av den siste COVID-19-gjenoppblomstringen på kontinentet." Kan ayaa ku gacan seeray […]